Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 26)
Lewa Home, Roms Lewa wuxuu u leeyahay Launcher u dhan Android
Lewa Home waa Roms Lewa's Launcher u gaar ah wuxuuna qaab ku leeyahay Apple macruufka ugu nadiifsan.
Whatsapp kombuyuutarka goor dhow
Waxay u badan tahay in ka faa'iideysiga shaqada nooca WhatsApp-ka ee HTML5 ee loo sii deyn doono Firefox OS, waxay si buuxda ula jaan qaadi doontaa PC-ga
Play Store ayaa lagu cusbooneysiin doonaa Android 4.4 Kit Kat
Sida caadiga ah, imaatinka dhow ee android 4.4 Kit Kat waxaa sidoo kale jiri doona cusbooneysiin cusub oo ka socota Google Play Store.
BBM ee loogu talagalay Android: yaa sugaya rajo beel!
Sugitaanka macluumaad yar oo ku saabsan bilawga BBM ee loogu talagalay Android iyo iOS wuxuu dilayaa dhalanteedka dadka isticmaala labada nidaam ee hawlgalka moobiilka.
Malwarebytes, Suite caan ku ah Windows-ka oo ka dhan ah khayaanada wuxuu yimaadaa Android
Malwarebytes waa nooc caan ah oo Windows ah oo ugu dambeyntii u yimid Android si uu uga ilaaliyo terminaalkeena malware.
Lenovo Super Camera, waa codsi kamarad xasaasi ah oo loogu talagalay Android-kaaga
Codsi kamarad xasaasi ah oo loogu talagalay terminaalka Android, Lenovo Super Camera ayaa loo heli karaa si toos ah looga soo dejiyo APK halkan.
10 barnaamij si aad uhesho oo aad safka ugujirto
Android waxay leedahay codsiyo waaweyn oo qaab ahaan loo qaabeyn karo, si ay u awoodaan inay ka saaraan xitaa culeysyo dheeri ah oo dheeri ah iyo inay yeeshaan tiro aad u taxaddar badan.
Codsiyada aan macquul ahayn ee Android: Maanta Nubefone, wicitaano aad u jaban
Nubefone waa adeeg cusub oo noo ogolaanaya inaan ku yeerno wicitaano cod oo caadi ah qiimo aad u tartan badan iyo hadiyad soo dhaweyn shan euro ah.
KitKat 4.4 icons soo degsiimo bilaash ah
Toddobaadkii dhammaadkiisii, sawirro la mooday inay tahay in loo adeegsado Android KitKat 4.4 ayaa la sii daayay, sida kan aad aragto ...
Android 4.4 KitKat waxay lahaan doontaa codsi asal ah oo SMS ah
Adoo adeegsanaya Android 4.4 KitKat waxaad ku dooran kartaa mid ka mid ah codsiyada SMS-ka ee aan ugu talagal ahaan ugu dirno una soo dirno dhammaan noocyada fariimaha.
Barnaamijyo waxtar leh oo loogu talagalay Android: Flashify
Flashify waa mid ka mid ah barnaamijyada loogu talagalay Android ee ay tahay inay ku jiraan liiska barnaamijyada waxtarka u leh Android.
Barnaamijyo waxtar leh oo loogu talagalay Android: Super Backup: SMS & Xiriirada
Waxaan ku bilaabaynaa qaybtaan cusub ee Barnaamijyada Faa'iidada leh ee Android dalab aad u faa'iido badan oo ku saabsan keydinta iyo dib u soo celinta.
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta Beddelida Waraaqda
Beddelka Waraaqda ayaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah codsiyadaas cajiibka ah ee loogu talagalay Android iyada oo ay ugu wacan tahay fududaanteeda iyo shaqeynteeda.
Apple oo aan lahayn Steve Jobs, ayaa lagu xukumay guuldarro?
Shaki kuma jiro in sawirka Steve Jobs uu in badan ka maqan yahay safka Apple, sidaas darteedna ay u qeexi karto dhammaadka xilli sharaf leh.
Ku soo dejiso Waraaqda Rasmiga ah ee loogu talagalay Android 4.4 Kit Kat
Maanta waxaan rabnaa inaan wadaagno waraaqda rasmiga ah ee Android 4.4 Kit Kat oo ay weheliso xirmo sumadeed oo bixin doonta muuqaalka guud ee nooca cusub ee Android.
Telefoonada casriga ah ee kale ee 'Android' oo qiimo fiican ku fadhiya
Gudaha taleefannada casriga ah ee casriga ah waxaan dooneynaa inaan ku soo qaadno moodooyinka kale ee Android oo leh astaamo wanaagsan oo qiimo fiican leh, Maanta Neken N6
Ciyaaraha Rockstar waxay kusii daayaan Buugga Google xatooyo rasmi ah Grand Auto Buugga
Buugga rasmiga ah ee loo yaqaan 'Grand Theft Auto V' wuxuu uga yimaadaa Android ciyaaraha Rockstar Games isagoo wata nuxur firfircoon iyo nooc kasta oo macluumaad ah.
Microsoft waxay ku cusbooneysiisaa barnaamijka 'Outlook.com' ee loogu talagalay Android horumarin muhiim ah
Outlook.com ee loogu talagalay Android waxaa lagu cusbooneysiiyay horumarin weyn sida raadinta farriinta ama is waafajinta la hagaajiyay oo leh waxyaabo yaryar oo kala duwan.
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android: Maanta Torrent & Maareeyaha Soo Dejinta
Maamulaha Torrent & Download waa maamule soo dejinaya durdur dareen leh oo loogu talagalay Android iyo mid ka mid ah codsiyada aan muhiim u noqon doonin innaga.
Hugo Barra wuxuu durbaba ku sugan yahay xafiiskiisa isagoo shaqeynaya. Muxuu ku biirin doonaa Xiaomi maxaana heli doonaa badal ahaan?
Hugo Barra wax badan ayuu ku biirin doonaa shirkad Shiineys ah sida Xiaomi, laakiin wuxuu sidoo kale soo uruurin doonaa khibrad aad u muhiim ah oo ku saabsan sida suuqa Shiinaha u shaqeeyo
Nooca Pro ee uTorrent caan u ah Android ayaa imanaya
Ka dib in ka badan hal sano oo leh nooca beta, nooca Pro ee uTorrent for Android ayaa ka muuqda Google Play, taasoo ka dhigeysa xayeysiinta inay baaba'do.
Smart Launcher Launcher ka duwan oo aad u fudud
Smart Launcher waa Launcher gebi ahaanba ka duwan wixii aan ku baran jirnay Android, shaqeyneyn iyo kheyraadka ugu badnaan.
Sida loo rakibo kamaradda Xperia kamaradaha kale ee Android
Xperia Camera waa deked ka mid ah barnaamijkii asalka ahaa ee Sony iyo qalabkeeda Xperia, oo loogu talagalay moodooyinka kale ee Android.
Tapatalk hadda waa bilaash oo nooca HD ee loo yaqaan "Pro"
Tapatalk ayaa sannadkan beddelaysa qaabka ay u haysato noocyada kala duwan ee ka sameysmay codsigeedii madasha caanka ahaa, ugu dambayntiina leh laba.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah: Maantana Launcher Big UCCW Maqaarka
Maqaarka Weyn ee UCCW Maqaarka ayaa u rogi doona Launcher-keena Nova Launcher, Apex ama Holo Launcher inuu noqdo launcher la arki karo xitaa iftiinka qorraxda.
Barnaamijyo Cajiib ah oo loogu talagalay Android: Maanta Jadwalka Whatsapp
Jadwalka WhatsApp waa codsi naga caawin doona otomatiga fariimaha WhatsApp-ka oo aan ugu dirno hal ama in ka badan oo xiriir ah waqtiga iyo maalinta loo ballamay.
Soo dejiso kamarad Motorola X apk si aad ugu rakibto wixii Android ah
Toos u soo dejiso barnaamijka kamaradaha Motorola X apk, ee loogu talagalay terminal kasta oo Android ah.
Sida loo dhigo lambarka sirta ah qalabkaaga Android maareeyaha qalabka Google
Waad salaaman tihiin dhamaantiin! Kani waa maqaalkeygii ugu horeeyey ee wax ku biiriyaha webka googleizados.com. Si aan ugu soo baxo sidan oo kale, waxaan u maleynayay ...
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta Gallery Plus - Qari Sawirada
Gallery Plus - Qari Sawirada waa mid ka mid ah codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android ee na siiya fursado badan oo aan ku maareyn karno galleheena.
Tag Go Launcher EX iyo Go Locker laba qof oo hore isu yaqaanay oo gebi ahaanba la cusbooneysiiyay
Maanta waxaan rabaa inaan ku barto Go Launcher EX iyo Go Locker, oo laba jir ah oo caan ku ah dhammaan kuwa dib ugusoo cusboonaada muuqaal cusub iyo shaqooyin cusub.
JAILBIL iyo xidid on boosteejooyinka mobile. Wanaag ama xun?
Jailbreak iyo xidid, taasi waa su'aasha Susana de la Fuente lagu waydiiyay wareysi laga qaaday barmaamijyada.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah: Faahfaahinta faylka maanta ugufiican
Faylka Faylka waa fayl baare cusub oo kasbaday ka mid noqoshada qaybta Barnaamijyada Cajiibka ah ee loogu talagalay Android.
Google wuxuu mamnuucayaa ogeysiisyada riixista leh xayeysiinta
Toddobaadkan, shuruudaha cusub ee horumariyaha Google Play ee mamnuucaya ogeysiisyada riixitaanka ee xayeysiinta lagu taageerayo ee barnaamijyada ayaa dhaqan galaya.
Barbaraha 10-band ee bilaashka ah ee Android-kaaga qaab apk ah
Halkan waxaan kuugu keenayaa 10 Balanbaaraha Barxadda weyn gebi ahaanba bilaash ah Android-keena. Waxaan haynaa arjiga tooska loogu soo dejisto oo ah qaab apk ah
Cusbooneysii thumbnails-ka ka muuqda tabka cusub ee Chrome
Sidaad ogtahay, markaan marino tabka cusub ee Google Chrome, barowsarku wuxuu ina tusayaa sideed thumbnails oo leh websaydhyada ...
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android: SuperBeam Maanta
SuperBeam waa mid ka mid ah Codsiyadaas oo aan ka badnaan karin kuwa loo yaqaan qaybta codsiyada cajiibka ah ee Android.
Sida loo dhejiyo shaashadda Samsung Galaxy S4 ee qufulka 'Android 4.0+' terminal kasta
Galaxy S4 Lockscreen waxay noo ogolaaneysaa inaan ku rakibno nidaamka qufulka Samsung Galaxy S4.0 wax kasta oo ah Android 4 ama ka sareeya. Kaliya leh App bilaash ah.
Android Video-Tutorials oo loogu talagalay qof walba: Sida loo badbaadiyo loona waafajiyo xiriiradayada daruuraha adoo adeegsanaya Gmail
Tusmooyinka aasaasiga ah ee fiidiyowga ah ee loogu talagalay dadka bilowga ah ee aan wax ku baro si ay u keydiyaan oo ay u waafajiyaan xiriirada daruuraha adoo adeegsanaya Gmail.
Facebook wuxuu cusbooneysiiyaa Android oo u oggolaanaya tafatirka farriinta
Facebook wuxuu helayaa cusbooneysiin kale oo cusub, laakiin wali waxay haysaa waddo dheer oo loo maro si loo gaaro codsigaa ay dad badani u doonayaan aaladaha mobilada.
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta CoolAR Mix
Isku-dhafka CoolAR wuxuu ku kasbaday kaydkayaga gaarka ah ee Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android.
Ku soo dejiso codsiyada lacag-bixinta gabi ahaanba bilaash iyo sharci ahaan
Si loogu dabaaldego sanadguuradii kowaad ee dukaanka Amazon App Store, Amazon Apps waxay siineysaa lix barnaamij oo lacag ah 24 saac.
Ka caawi meelaynta GPS-kaaga TopNTP
Sida loo wanaajiyo goobahaaga GPS-ka ee GPS si aad ugu hesho xawaare iyo tayo calaamadeysan TopNTP, codsi gebi ahaanba bilaash ah
Google wuxuu ku darayaa tilmaamaha xaaladda Hangouts ee Android
Hangouts waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo muuqaalka awood u lahaanshaha inuu arko helitaanka khadka tooska ah ee xiriiradaada.
Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android: Maanta WhatsApp offline
WhatsApp offline waa codsi bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo noo ogolaanaya inaan si fudud u joojino ogeysiisyada WhatsApp.
Sida loogu sahlo Nidaamyada Degdegga ah ee ku yaal terminaal kasta oo Android ah
Dejinta Degdegga ahi waa mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ama waxqabadka cusub ee ay jelly Bean Android noo timid.
Cusbooneysiinta Twitter-ka oo leh ogeysiisyo riix ah oo loogu talagalay waxyaabaha lagu taliyay
Twitter wuxuu soo qaataa nooc cusub oo leh ogeysiisyo riixid ah oo muujinaya waxyaabaha ku jira waqtiga asxaabtaada.
Digniin: Weerarada internetka ayaa lagu ogaadey dadka isticmaala WhatsApp
Galabta warku wuxuu jabiyay weeraro cusub oo taxane ah oo loo adeegsaday dadka isticmaala WhatsApp, kuwaas oo ku heli doona ogeysiisyo xun xun emaylka
Sida loo sameeyo ScreenCast on your Android la taariikhqorihii Screen
Diiwaanka shaashadda SCR wuxuu noo oggolaanayaa inaan ka sameysano ScreenCast barnaamijkeena 'Android', oo ay ku jiraan boosteejooyinka leh Tegra Chip
Sida ugu fudud ee loo maareeyo waxyaabaha ku jira terminaalkaaga Android
Moborobo waxay noo oggolaaneysaa inaan si fudud ugu maamulno dhammaan waxyaabaha ku jira barnaamijkeenna 'Android', xitaa nidaamka barnaamijyadooda u gaarka ah.
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android: Maanta PicPac Camera
Raadinta codsiyo bilaash ah oo cajaa'ib leh oo loogu talagalay Android waxaan la kulannay barnaamijkan Kameradda xiisaha leh ee loogu talagalay Android.
Sida loo Jabsado Password Wifi si fudud oo leh SpeedKey ee Android
Iyadoo la adeegsanayo SpeedKey ee loogu talagalay Android waxaan ku qeexi karnaa ereyada sirta ah ee Wifi kaliya 20 ilbidhiqsi iyo innaga oo iska leh Android.
Ku soo dejiso faallooyinka Isbaanishka ee Fifa 14 - Bilaash -
Fiidiyowgaan waxaan ku tusinaynaa sida si dhakhso leh loogu beddelo faallooyinka Isbaanishka. Waxaan xusuusan nahay inay gebi ahaanba BILAASH tahay.
Sida loo qaabeeyo Maareeyaha Aaladda Android inuu u xirmo una masaxo taleefankaaga
Maareeyaha Aaladda Android waa aalad fudud oo awood leh oo ka ilaalin doonta terminal-kaaga gacanta kuwa kale. Waxaan ku tusineynaa sida loo qaabeeyo.
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta Taabanaya Keyboard X
Koobabka taabashada taabashada ah ee TouchPal X waa kumbiyuutar caqli-gal ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Android oo na siiya fudeyd weyn, shaqeyn iyo xawaare jawaab.
BBM-ka loogu talagalay Android weli lagama heli karo Play Store-ka, taxaddar waxaad soo dejiso !!
17:30 galabnimo, waqtiga Isbaanishka, BBM-ka loogu talagalay Android weli lagama heli karo Bakhaarka Play Store ama bogga rasmiga ah ee BlackBerry.
Dhaqaaqdo, dalabkii diiwaangeliya dhammaan jimicsigaaga wuxuu yimaadaa Android
Dhaqdhaqaaqa ayaa bixiya, iyada oo aan loo baahnayn inaad iibsato qalab gaar ah, si aad u awoodo inaad ku duubto dhammaan jimicsigaaga iyo hawl maalmeedkaaga bartaada 'Android'
Waraaqaha ugu Wanaagsan ee Live-ka ah ee loogu talagalay Android-kaaga: Maanta Gallery 3D Live Wallpaper
Qeyb cusub oo ku jirta androidsis oo aan kugu soo bandhigi doono waraaqda ugu fiican ee bilaashka ah ee loogu talagalay boosteejadaada.
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta Smart Call Acept
Qeybtaan cusub ee Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android waxaan ku soo bandhigeynaa Aqbalaha Wicitaanka.
Wax kasta oo Guriga ah (Beta), Launcher oo ku habboon baahiyahaaga
Waxkasta oo Hoyga ah (Beta) waa Launcher bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo ku habboon baahiyaha daqiiqad kasta.
Ku iibi sawirradaada Foap for Android
Meelaha Foap ee ku yaal Android, waa codsi bulsheed oo u oggolaanaya iibinta iyo iibsashada sawirrada 10 doolar, ikhtiyaar wanaagsan oo lagu helo bil kasta oo dheeri ah.
Sida loo kiciyo laba xisaabood oo WhatsApp ah isla terminal (2 ama +)
Cashar fudud oo aad ku isticmaali karto laba ama in ka badan koontooyinka WhatsApp ee ka socda hal terminaal Android ah.
Hadda waad ka qaybqaadan kartaa dhiirrigelinta Kitkat-ka Android si aad ugu guuleysato 1000 kiniin 7 Nexus XNUMX ah
Maalintii Google ku dhawaaqay nooca cusub ee Android 4.4 KitKat, waxay sidoo kale soo bandhigtay dhiirrigelinta inay ku guuleysato 1000 Nexus 7 iyada oo loo marayo baararka nacnaca ee KitKat.
Barnaamijyada Cajaa’ibka leh ee Android: Maanta Wicitaan Popout
Qeybtaan cusub ee Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android waxaan ku soo bandhigeynaa Call Popout, oo ah barnaamij bilaash ah oo lagu maareeyo wicitaanada qaabka loo yaqaan 'Chat Heads style'.
Aldiko Book Reader Premium oo la cusbooneysiiyay ilaa v.3.0 iyadoo dib loogu cusbooneysiinayo muuqaalka muuqaalka
Akhristaha ugu caansan Android, Aldiko Book Reader Premium, wuxuu helaa casriyeyn weyn oo gebi ahaanba cusbooneysiisa muuqaalkeeda muuqaalka ah.
Sida WhatsApp loogu rakibo laba qalab isla mar
Tabobar tallaabo-tallaabo ah si WhatsApp loogu rakibo laba isgoys oo Androis ah isla waqtigaas.
Hogaamiyaha Mashruuca Android AOSP ayaa Google uga tagaya Yahoo!
Jean-Baptiste Queru, oo ah madaxa mashruuca Android AOSP, ayaa ka tagaya Google kuna socda Yahoo kadib dhibaatooyin ka haysta iswaafajinta darawalnimada.
Soodejiso maqaarka UCCW
UCCW Maqaarka la soo degsashada bilaashka ah iyo habka saxda ah ee loogu adeegsado kombuyuutarkaaga kumbuyuutar iyada oo la adeegsanayo cashar tallaabo tallaabo ah.
YouTube ayaa ku dari doona dib u soo celinta qadka tooska ah barnaamijyada moobiilka bisha Nofember
Muuqaal xiiso leh oo YouTube ku dari doono barnaamijyada moobiilka ayaa awood u leh inuu kaydiyo fiidiyowyada gudaha si uu uga ciyaaro khadka.
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android Maanta: AutomateIt-Automate Your Droid
Gudaha Codsiyada Cajiibka ah ee loogu talagalay Android maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa App bilaash ah oo noo oggolaan doona inaan automate ka dhigno terminaalkeena.
Qalabka Android Kit Kat 3D Waraaq bilaash ah oo ku yaal Play Store
Waraaq toos ah ama warqad muuqaal ah oo animated ah oo loogu talagalay Android kaaga oo ku saleysan Android Kit Kat, gebi ahaanba bilaash ah iyo 3D.
Maqaarka UCCW: Tiles 4.0 by dadilydoo tallaabo tallaabo tallaabo ah
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u rakibto maqaar ama mawduuc ku saleysan UCCW, gebi ahaanba Isbaanish iyo dhammaan faylasha lagama maarmaanka ah.
Tilmaamo cusub oo ku jira Maareeyaha Qalabka Android
Google wuxuu ku darayaa laba aaladood oo cusub Maareeyaha Aaladda taas oo kuu oggolaaneysa inaad beddesho erayga sirta ah isla markaana aad xirato adigoon tirtirin.
Chrome beta 30 ee loogu talagalay Android wuxuu sababa dib u soo kabasho goos goos ah oo ku saabsan qalab fara badan
Chrome beta 30 ee loogu talagalay Android waxay leedahay arrimo halis ah oo sababaya rebootsyo goos goos ah oo ku saabsan qalabka kala duwan ee Android.
Sida loo rakibo barnaamijka 'Samsung Galaxy S4 Launcher' ee Android kasta
Tutorial si aad u soo dejiso oo aad u rakibto Launcher-ka Samsung Galaxy S4 ee asalka ah iyada oo ay la socdaan dhamaan wixii Widget-yada ah iyo shaqooyinka gaarka u ah wixii Android ah.
Android 4.4 Kit Kat astaamaha qaar iyo taariikhda sii deynta ee suurtogalka ah
Taariikhda suuragalka ah ee lagu sii deyn karo nooca cusub ee Android 4.4 Kit Kat iyo daadinta qaar ka mid ah astaamaheeda cusub.
La cusbooneysiiyay Solid Explorer oo leh boggaga calaamadaha la hagaajiyay, taageerada Android 4.3 iyo in ka badan
Qaybta 1.5 ee loogu talagalay Solid Explorer, oo bixisa taageerada Android 4.3 oo kuu oggolaanaysa inaad u isticmaasho macaamiisha sida MediaFire daruuraha.
Sida loo dhagaysto loona arko ogeysiiskaaga sugaya iyadoo loo marayo Bluetooth-ka gaariga
Botifier wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka helno ogeysiisyada ka yimaada Android-keena illaa qoraalka TTS illaa hadalka iyo shaashadda raadiyaha baabuurkeena sida qoraalka.
Google Drive ayaa lagu cusbooneysiiyay horumarin dhowr ah oo ku saabsan abuuritaanka waraaqaha
Google Drive waa adeeg kaydinta daruurta oo u taagan abuurista waraaqo iyo in noocyadan cusub la hagaajiyay.
Ubuntu Lockscreen, oo ah barnaamijka furitaanka Ubuntu Touch ee dhabta ah ee loogu talagalay Android-kaaga
Ubuntu Lockscreen waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo naga dhigi doona inaan jilno Ubuntu Touch Lockscreen on Android.
Top 5 maareeyayaasha faylka bilaashka ah ee Android
Waxaan falanqeyneynaa 5 ka mid ah maareeyayaasha faylasha bilaashka ah ee Google Play.
Ciyaartoyda muusikada ugu fiican ee Android
Way adag tahay in la xusho kuwa ugu fiican, laakiin shantaan ciyaartoy muusig: PowerAmp, Winamp, VLC, Neutron Music Player, iyo N7 Player ayaa ugu fiican halkaas.
Sida looga soo degsado fiidiyowyada YouTube-kaaga Android-kaaga ah
You Tube Downloader waa qaab lagu hirgaliyay codsigii asalka ahaa ee Google kaasoo na siinaya suurtagalnimada inaan kala soo baxno waxyaabaha kanaalka.
Simplenote, adeegga qoraallada iskutallaabta ayaa ku yimaada Android
SimpleNote ugu dambayntii waxay ku timid Android, iyada oo isu soo bandhigaysa codsi qoraal qoraal ah oo si toos ah ula tartami doona Google Keep ama Evernote.
Ku soo dejiso APK-ka cusub ee Google Play Music oo leh noocyo muusig oo loogu talagalay Raadiyaha iyo waxyaabo kale oo badan
Nooc cusub oo Google Play Music ah oo leh noocyada Raadiyaha iyo waxyaabo kale oo badan, sida hagaajinta liiska soo dejinta ee heesaha leh "pin".
Sida loo ekaysiiyo tilmaamaha Samsung Air ee Tilmaamo kasta oo leh Hovering Controls
Hawlaha xakamaynta ayaa noo oggolaanaya inaan isticmaalno dareeraha dhawaanshaha qalabkeenna si aan ugu ekeysiino Samaynta Shirkadda 'Samsung Air Gestures' iyo inayna taaban shaashadda.
Sida loo rakibo barnaamijyada aan ku habboonayn qalabkeena
Casharbarka si aad uga ag dhowaato xaddidaadaha Play Store oo aad u rakibi karto codsiyo aan la taageerin ama dukaanno marin looga heli karo meelaha kale.
Sida loo xidido terminal-kaaga Android Framaroot
Casharro talaabo-tallaabo ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay soo dejinta iyo adeegsiga Framaroot si aad u xididdo Android
Beddelka keydka App-ka Android Play Store
Liiska waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan ee lagu kaydiyo barnaamijka dukaanka Android Play Store, oo ay ku jiraan habka rakibaadda iyo isku xidhka si aad u soo dejiso
Sida looga daawado TV toos ah taleefankaaga casriga ah ee casriga ah ama 'Tablet'
DTT Directo TV waxay noo ogolaaneysaa inaan TV-ga toos uga daawano qalabkeena Android gabi ahaanba bilaash.
Miui Miisaanka loogu talagalay wixii Android ah oo leh Android 4.0 ama ka sareeya
Miui Deskclock waa saacadda desktop-ka ee Roms-ka kooxda horumarinta Miui, halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa apk ansax ah wixii Android 4.0 ama + ah
Sida loo waafajiyo xiriiradaada Facebook ee Cyanogenmod 10.1 iyo 10.2 roms
Tabobar-tallaabo tallaabo ah si loogu waafajiyo xiriirada Facebook ee noocyada Android 4.2.2 iyo 4.3
Xeeladaha Android (V): Wadooyinka loo maro marinnada terminal-ka Android
Tilmaamaha aaladaha Android si fiican ayey u shaqeeyaan tan iyo markii ay na siinayaan waxqabad aad u sarreeya oo leh hal guji
Qaybinta noocyada Android-ka ee Sebtember: Jelly Bean wuu koraa
Xogta qaybinta noocyada kala duwan ee Android ayaa soo ifbaxday shalay, waxayna soo bandhigaysaa Jelly Bean oo ah nooca soo kordhay.
AntTek, sahamiyaha faylka xididka xasaasiga ah oo leh shaqooyin badan
AntTek waa sahmiyaha faylka weyn ee bilaashka ah ee bilaashka ah, oo laga heli karo si toos ah loogala soo bixi karo halkan halkan ama horumarinta XDA.
Waraaqaha dhammaan noocyada Android
A google iyo dhowr isticmaale ayaa mas'uul ka ahaa sameynta dhammaan waraaqaha noocyada Android ee ay heli karaan bulshada Android.
Sidebar oo lagu daray, shaqo badan oo cajiib ah oo loogu talagalay terminal kasta oo Android ah
Sidebar plus waa codsi bilaash ah oo aan kala soo bixi karno oo aan si toos ah ugu rakibi karno terminaal kasta oo Android leh nooca 2.2 ama ka sareeya.
Sida loo dhigo batoonada kumbuyuutarka ee 'Nexus' terminal kasta
Cashar fudud oo aan ku awoodi doonno inaan karti u siino badhamada kama dambaysta ah ee aalad kasta oo hore u rujin jirtay Android
Wadahadalka hagaajinta nooca cusub ee Twitter ee loogu talagalay Android
Codsiga rasmiga ah ee Twitter ee loogu talagalay Android wuxuu helayaa cusbooneysi cusub oo leh hagaajinta wadahadalka iyo ku habboonaanta moodooyinka hooseeya.
Tabaha Android (IV): Widgets-ka terminalkeena
Dhammaan waxyaalahaas aan ku aragno miisaska taleefannada sida saacadaha, macluumaadka cimilada iyo wixii la mid ah waa widget. Waxaan u sharaxeynaa wax walba oo iyaga ku saabsan.
Fikradayda ku saabsan deegaanka deegaanka ee Android iyo hareeraheeda
Android waa nidaam aad u ballaadhan oo hawlgal ah sidaa darteedna leh dhibaatooyin xagga amniga ah oo weyn, laakiin guulaha ay gaadhay Google sidoo kale waa in lagu ammaano.
Xeeladaha Android (III): Calooshood u shaqeystayaasha
Thanks to qoraalkan waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ogaanno xogta ugu muhiimsan ee qalabkeena, adoo adeegsanaya xeeladaha aan hoos ku tusnay.
Qari SoftKeys (Badhamada Furaha) ama beddel
Haddii mobilkaagu leeyahay badhanno gujis ah, hubaal mararka qaarkood waxay la wareegeen goob shaashad ah markii aad aragto ...
Duolingo ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.2 iyada oo lagu taageerayo khadka tooska ah
Duolingo wuxuu noqon karaa saaxiibka ugu fiican ee safarka ama fasaxa si uu u barto luqadda Ingiriisiga hab raaxo leh
Tilmaamaha Android (IV): Sideen ku ogaadaa in qalabkeygu casrigan yahay?
Waa muhiim in la ogaado nooca Android ee aan ku haysanno qalabkeenna; ogow haddii nooc cusub loo heli karo xarunteenna iyo in ka badan.
Minuum, kumbuyuutar kala duwan oo loogu talagalay Android-kaaga
Minuum wuxuu keenayaa qaab cusub oo loo adeegsado kumbuyuutarka Android iyo kuwa idinka mid ah oo raadinaya ikhtiyaar kale oo ku yaal teebabka Android ee jira, ha noqoto ikhtiyaar.
Ku soo dejiso nooca cusub 5.0 ee Youtube adoo adeegsanaya hawlo badan, qaab muuqaal cusub iyo muuqaal cusub
YouTube wuxuu u muuqdaa nooc cusub, 5.0, oo leh qaab hawleed badan oo ku dhex jira dalabka, qaabka muuqaalka ee kiniiniyada iyo is dhexgal cusub oo ku saleysan kaararka
Waqtigu waa muuqaal ahaan mid ka mid ah saacadaha alaarmiga ee ugu fiican Android
Haddii aad rabto saacad qaylo-dhaan oo cusub oo loogu talagalay barnaamijkaaga 'Android', '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad u baahan tahay oo leh muuqaal qurux badan oo muuqaal ah iyo adeegsiga tilmaamaha
AirCast waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka daawato fiidiyowyada Gallery, Dropbox iyo Drive ee leh ChromeCast
Mid ka mid ah hal abuureyaasha ugu wax ku oolka badan ee 'Android', Koush, ayaa ka yimaada AirCast, si uu uga ciyaaro fiidiyowga shaashadda, Dropbox ama Drive-ka TV-gaaga.
Nooca cusub ee Khariidadaha Google oo leh dhismayaal 3D qaabaysan
Khariidadaha Google ayaa helay casriyeyn wanaagsan xagaagan, taas oo aad u jecel ama u neceb bulshada Android. Maanta waxay keeneysaa cusbooneysi cusub.
Sidee loo qariyaa waqtiga ugu dambeeya ee isku xirnaanta WhatsApp?: WhatsHide Last Seen
Waqtiga ugu dambeeya ee isku xirnaanta WhatsApp wuxuu na ogeysiinayaa saacadii ugu dambeysay ee adeegsaduhu ku xirnaa adeeggan. Si aad isaga ilaaliso: WhatsHide Last Seeen
CheapCast waxay qalab kasta oo Android ah u rogtaa Chromecast
CheapCast waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku aragto telefishinnadaada ama kiniiniyadaada adoo adeegsanaya aaladda Android wax kasta oo aad rabto adigoo isticmaalaya YouTube, NetFlix ama Google Music.
Google wuxuu sharciyeeyay kala duwanaanshaha nidaamka amniga Android: Qaabka
Qaabku waa hab amni oo aad waxtar u leh (qufulka terminal). Google wuxuu rukhsad ka helaa kala duwanaansho iyadoo si dhaqso leh loo helo barnaamijyada.
Nooca cusub ee 'Nova Launcher' oo wata horumarin asal ah
Mid ka mid ah kuwa wax iibsada ee ugu caansan Android, Nova Launcher, ayaa la cusbooneysiiyay oo ay ku jiraan horumarinno sida qaababka loogu talagalay dekedda ama astaamaha.
Google wuxuu soo bandhigayaa Maareeyaha Aaladda Android si uu u helo taleefankaaga kaa lumay
Ka habsaan sidii hore weligeed, oo Google waxay soo bandhigtay adeegga Maareeyaha Aaladda Android ee ku jira Android, si loo baaro loona tirtiro xogta taleefankeenna.
Khiyaamada Android (II): TalkBack
TalkBack waa muuqaal marin u ah isticmaale kasta, inta badanna loogu talagalay kuwa aragga naafada ka ah.
Kalandarka Google ayaa ugu dambayn iswaafajinaya ogeysiisyada u dhexeeya aaladaha
Nooca cusub ee Kalandarka Google wuxuu bixiyaa iswaafaqeyn udhaxeysa aaladaha iyadoo loo mahadcelinayo adeegga cusub ee Google ee iswaafajinta ogeysiinta.
Injineer Google ah ayaa sharxaya ogeysiis joogto ah oo ku saabsan Android 4.3
Injineer Google ah ayaa sharraxay sababta ogeysiisyada joogtada ah ee codsiyada qaarkood ee ku sii jiraya asalka Android 4.3
Dhammaan wixii ku saabsan Android 4.3
Android 4.3 ayaa ugu dambeyntii soo muuqatay oo horeyba dhammaan qalabka Nexus waa la cusbooneysiiyay. Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan nooca cusub ee Android.
Cheats Android (I): Macluumaadka Milkiilaha
Qeybtaan cusub, Android Tricks, waxaan ugu tala galnay inaan kugula socodsiino khidadaha qarsoon ee Android sida Macluumaadka Milkiilaha.
Sida loo rakibo barnaamijyada ku saabsan Android (iyo IV): Fidinta saxda ah
Tilmaam u siinta saxda ah ee barnaamijyada ku jira Android, adigoo ka takhalusaya hadhaaga ay ka tagayaan.
Had iyo jeer ku furo Chrome qaab qarsoodi ah
Haddii aad isticmaaleyso kumbuyuutar aad adigu leedahay iyo in kale oo aad rabto inaad ka hortagto in xogtaada la keydiyo ...
Ciyaaraha Google Play waxay leeyihiin codsi u gaar ah ilaa shalay
Horumar muhiim ah oo lagu abuuro barxad ciyaarta fiidiyowga ee nidaamka hawlgalka Android oo leh barnaamijka Ciyaaraha Google Play ee la heli karo ilaa shalay.
Sida loo rakibo barnaamijyada ku saabsan Android (III): U wareeji codsiyada kaarka SD
Tilmaame yar oo lagu fahmo sida loogu dhaqaajiyo codsiyada kaarka SD, kuwee la guurayo iyo sababta.
Android 4.3 ugu dambeyntii waa halkan
Dhacdadii Google ee maanta la soo saaray, nooca cusub ee Android 4.3 wuxuu u muuqday mid taageero u ah adeegsadayaal badan oo leh astaamo xaddidan.
Cusboonaysiinta Evernote oo leh horumarin weyn
Barnaamijka rasmiga ah ee Evernote waxaa lagu cusbooneysiiyay xoojin weyn oo loogu talagalay ugu horreyn wax soo saar shaqsiyeed.
Snapchat, oo wata sawirro isdaba-joog ah iyo fiidiyowyo, ayaa ku habboon xagaagan kulul
Snapchat waxaad ku diri kartaa sawirro iyo fiidiyowyo is-dumin kara waqtiga aad dooratay iyo maya, ma uusan abuurin madaxa Isbatooraha Qalabka.
Sida loo rakibo barnaamijyada ku saabsan Android (II): Soo degsashada tooska ah
Tilmaamahan yar waxaan ku sharxi doonaa sida loo rakibo barnaamijyada Android ee la soo dejiyey ama loo soo guuriyey aaladda.
ReKey waxay dhejisaa u nuglaanta Master Key ee adeegsadayaasha xididka ku leh boosteejooyinkooda
Qof kasta oo aan haysan Google Edition ama terminal CyanogenMod wuxuu rakibi karaa ReKey si uu u dhejiyo u nuglaanta Master Key.
Farshaxan Paper ah, oo sameeya Kaamerada Waraaqaha, oo laga heli karo Google Play
Paper Artist wuxuu kudhameystiraa waxyaabaha u gaarka ah aaladaha Samsung, laga bilaabo maanta waxaa laga iibsan karaa Google Play.
Sida loo rakibo barnaamijyada ku saabsan Android (I): Dukaamada arjiga
Tilmaamahan yar waxaan ku sharxi doonnaa sida loogu rakibo barnaamijyada 'Android' dukaamada dalabka.
5-ta barnaamij ee waxbarasho ee ugu wanaagsan Android
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa liiska codsiyada waxbarasho ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android, taas oo noo oggolaan doonta inaan baranno xisaabta ama aan baranno luqadaha.
Dhammaan hagaajinta ayaa lagu daray nooca cusub ee Khariidadaha Google
Astaamo cusub oo ku saabsan cusbooneysiinta Khariidadaha cusub ee Google sida shilalka taraafikada iyo raadinta taariikheed ee raadinta ee ku habboon dalabka.
Xakamaynta fog ee dhammaan qalabka Android mahad TeamViewer QuickSupport
Teamviewer Quicksupport wuxuu lahaansho gaar ah lahaa dhowr terminal Samsung, tan iyo maalmahan ugu dambeeya waxaa loo heli karaa dhamaan aaladaha Android.
Badhanka la hibeeyay ee khariidadaha qadla'aanta lagu daray Khariidadaha Google iyadoo laga jawaabayo cabashooyinka
Cabashooyinka qaar ka mid ah isticmaaleyaasha maalmihii ugu dambeeyay dartiis, Google waxay ku qasbatay inay ku hirgeliso Khariidadaha Google badhanka si loo badbaadiyo aagga.
Daryeelka Horukacsan ee Moobilka: Midiyaha Ciidanka Switzerland ee loogu talagalay Android
Daryeelka Moobaylka ee Horukacsan waa codsi qalab badan leh oo leh fursado aad u fara badan oo lagu ilaalin karo qalabkeena Android xaalad qumman.
La cusbooneysiiyay Chrome-ka Android iyadoo la adeegsanayo taageerada shaashadda buuxda ee kiniinnada
Laba horumarin oo cusub oo aad muhiim ugu ah Chrome sida shaashad shaashad buuxda oo kumbuyuutar ah iyo turjumaadda bogga bogga.
La cusbooneysiiyay barnaamijka Tumblr ee loogu talagalay Android iyadoo leh horumarin weyn
Codsiga rasmiga ah ee Android ee shabakadda blog-ka ee loo yaqaan 'Tumblr micro blog network' ayaa lagu casriyeeyay is-dhexgal cusub iyo horumarin kale oo badan.
Tilmaamaha Android (III): Hababka Amniga ee Wax ku oolka ah
Amniga Android waa muhiim sidaa darteedna wuxuu leeyahay habab kala duwan oo lagu ilaaliyo terminal-ka: PIN, Password, Pattern iyo Face Unlock
Facebook ee loogu talagalay Android ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.4
Hadda laga bilaabo, kuwa haysta Android 2.3.7 ama nooc ka hooseeya, waxay u gudbin karaan arjiga Facebook microSD, oo keydinaya booska.
Codsiyada otomatiga ee aasaasiga ah ee loogu talagalay Android
Shan codsiyo otomaatig ah oo xafiiska lagama maarmaanka ah leh sharaxaad kooban iyo adeegsi, mid walboo kala duwan ayaa bixiya astaamo gaar ah oo iyaga ku kala duwan
6 khiyaamo loogu talagalay Nexus 4
Maanta waxaan sharaxayaa xoogaa khiyaanooyin ah si aan u wanaajiyo khibradaada Nexus 4 oo aad uga faa'iideysato wax walba ...
Sawirka Sawirka Sawirka Kalluunka, sawir qaade fudud oo awood badan
Sawir qaadahaan awooda badan, Sawirka Sawirka Sawirka Kalluunka, wuxuu inala joogay waqti dheer, isagoo noqday astaamo ka mid ah kuwa sida tooska ah ugu tartamaya Quickpic.
Fiidiyowyo Qabyo ah, Muuqaalka cusub ee YouTube ee Bogga Upload Video-kaaga Cusub: Xeelad si aad ugu hawlgeliso
«Fiidiyowyada la soo gelinayo YouTube-ka ayaa wax yar ka fudud. Aan fiirino waxa cusub. Calaamaddan ayaa ah tii ugu horreysay ...
Talooyinka Android (II): Sidee loo hagaajiyaa batteriga?
Batariga ku jira terminal-ka ayaa muhiim ah maadaama awooda ay tilmaamayso waqtiga uu qalabku noo sii socon doono marka lagu daro ilaha la heli karo.
Codsiga rasmiga ah ee Mega ayaa loo heli karaa Android
Adeegga keydinta daruurta ee Mega ayaa ka dhigtay codsi ay heli karaan dadka isticmaala Android si ay u maareeyaan koontadooda iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Codsiga Facebook wuxuu u diraa lambarka taleefankeena adeegeyaashooda
Symantec waxay xaqiijisay in codsiga rasmiga ah ee Facebook uu soo diro lambarka taleefankeena xitaa ka hor intaanan galin xogtayada
Sida loo abuuro isticmaaleyaal fara badan kiniinka Android
Tilmaame yar oo ku saabsan abuurista isticmaaleyaal fara badan kiniiniyada Android
Waa maxay codsiyada lagu rakibo xiriirka ugu horreeya ee lala yeesho Android
Marka ugu horeysa ee lala xiriiro Android, la qaabeeyey oo hadda waxaan eegeynaa Google Play oo aan helnaa kumanaan codsiyo ah. Kuwee baa la rakibayaa? waxaan kaa caawinaynaa inaad doorato.
Dhibaatada haysata antivirus been abuur ah oo ku saabsan Android
Dukaanka Play waxaa ku jira barnaamijyo fara badan oo antivirus been abuur ah oo malware galiya nidaamka qalliinka, taas oo iyana keenta in nidaamku qaab qaldan sameeyo.
Duolingo waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu wanaajinayo kaniiniga
Duolingo, oo ah codsigii ugu fiicnaa ee lagu barto Ingiriisiga, ayaa lagu cusbooneysiiyaa iyada oo la adeegsanayo kiniiniyada, taageerada qaabka muuqaalka iyo guddiga hoggaanka.
Saxaafaddu waa akhriste RSS kale oo heer sare ah oo Android ah
Saxaafaddu waxay u dhaxeysaa Feedly iyo gReader, iyadoo isu soo bandhigeysa inay tahay ikhtiyaar aad u fiican oo aad ku aqrisan karto RSS-kaaga quudintaada Feedly Cloud illaa Luulyo 1.
5-ta barnaamij ee ugu fiican ee xeebta la geeyo
Xagaaga kasta oo yimaada, waxaan isweydiineynaa waxa loo qaadayo xeebta: dallad, ilaalin ... Iyo barnaamijyo noocee ah in loo aado xeebta garoonkayaga Android?
Sida loo demiyo codsiyada nidaamka adigoon haysan marin xidid
Curyaaminta barnaamijyada horay loogu rakibay nidaamka Android iyo in aanaan isticmaalin, waxay noo ogolaaneysaa inaan xoreyno xusuusta oo aan keydinno batteriga.
Sida looga wareejiyo RSS quudintaada Google Reader loona wareejiyo Cloud Feedly Cloud
Waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka la raacayo si aan loo waayin quudintaada RSS iyo inaad awood u yeelato inaad ku isticmaasho Feedly Cloud barnaamijyada sida gReader ama Feedly lafteeda.
XPrivacy waxay bixisaa xakameyn buuxda oo ku saabsan rukhsadaha la siiyay codsi kasta oo rakibay
XPrivacy, oo ah codsi u muuqda inuu ilaalinayo arimahaaga gaarka ah iyo sida ay barnaamijyadu macluumaadka nooc kasta ah ugala soo baxayaan barta aad ku xiranto ee Android.
Tilmaamaha Android (I): Isha ku hay Google Play Store wixii iibsi aan loo baahnayn
Android waa nidaam aad u ballaadhan oo hawlgal ah oo leh astaamo badan waana sababtaas tan ku jirta barnaamijka 'Androidsis' waxaan ku siin doonnaa taxane taxane ah oo lagu hagaajinayo amniga
Waxyaabaha qarsoodiga ah ee Facebook ugu dambeyntii waa fiidiyowga 'Instagram'
Shalay dhacdadii Facebook waxqabadka cusub ee 'Instagram' ayaa lagu soo bandhigay isdhexgalka 15-ilbiriqsiyo yar yar oo fiidiyoow ah.
Wadahadalka Kakao wuxuu ku imaanayaa kumbuyuutarrada, La heli karo Juun 26
Kakao Talk wuxuu soo bandhigayaa nooca pc-ka ee adeega fariintiisa iyadoo bixinaysa suurtagalnimada inaad kula sheekaysato asxaabta iyo qoyska kombiyuutarka.
Demi cusbooneysiinta otomaatiga ah ee Chrome
Sidaad ogtahay, Google Chrome ayaa si otomaatig ah u cusbooneysiinaayay muddo dheer, isagoon na weydiin wax nooc ah oo oggolaansho ah. Haddii sabab uun ...
MyFitnessunes si aad u lumiso miisaanka oo aad ugu ekaato qaab ahaan hadda Isbaanish
Iyadoo keydka macluumaadka ee 600.000 loogu talagalay Isbaanish, MyFitnessunes wuxuu u muuqdaa noocyo luqado kala duwan leh oo Isbaanish lagu daray.
CPU-Z wuxuu ku wargelinayaa wax kasta oo ku saabsan qalabka taleefankaaga Android
Mid ka mid ah codsiyada lagu wareejiyo oo lagu hagaajiyo kombuyuutarka soo ururiyey waayo-aragnimo weyn sanado badan. Farxad wanaagsan imaatinkaaga.
Google Play Music waa la cusbooneysiiyay iyadoo sifiican loo xakameynayo isticmaalka xogta
Xakamaynta wanaagsan ee isticmaalka xogta iyo soo degsashada degdegga ah ee heesaha la jecel yahay oo ka mid ah nuxurka ku jira nooca cusub ee Google Play Music.
Sida loo nadiifiyo kaydka ku jira Android 4.2 hab deg deg ah oo fudud
Android 4.2 waxay leedahay wax ka badan isha, iyadoo ku jirta goobaha keydinta qalab awood badan oo lagu nadiifiyo keydka.
Sida loo beddelo nidaamka isku-darka iyo ogeysiiska ee Gmail-ka cusub
Gmail-ka cusubi wuxuu keenay horumarinno muhiim ah iyo muuqaal muuqaal ah oo tabs ah oo siinaya muuqaal midab leh oo siinaya waxqabad badan.
Sida loo maareeyo galka iyo sumadaha Gmail-ka cusub
Had iyo jeer way adkeyd in la maareeyo galka iyo sumadaha Gmail, taasoo keentay jahwareer. Qaabkan ugu dambeeyay, Google wuxuu hagaajiyay dhinacan.
Sida loo isticmaalo shaqooyinka qoraalka la ballaariyey ee keydka keydka Android
Qoraalka la balaariyay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u isticmaasho tuuryo gaaban weedho dhaadheer oo aad caadiyan isticmaasho wax badan isla markaana aad ka hawl gali karto kaydka keydka Android.
Cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay Launcher Action, oo ah barnaamij bilow ah oo casri ah
Liiska weyn ee hagaajinta noocyadan cusub ee 'Launcher Action', kaas oo keenaya howlo cusub oo ku saabsan soosaaraha moodada hadda.
Sidee looga soo kabanayaa badhanka "Tirtir" nooca cusub ee Gmail ee shalay ay soo saartay Google
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo soo cesho badhanka "Delete", si ay u muuqato markii fariin lagu furo Gmail, maadaama noocaani ugu dambeeyay uusan u muuqan mid iska caadi ah
Google wuxuu ku darayaa kumbuyuutarka Android keydka Google Play
Google wuxuu kudaray kumbuyuutarkiisa Android oo leh 4.2 astaamo sida teeb garaynta, is-dhammaystirka otomaatigga, iyo codbixinta Google Play
Sida loo cusbooneysiiyo Gmail qaabka ugu dambeeyay, Gmail 4.5 oo leh horumarin weyn
Toos u soo xiriir xiriiriyeyaasha iyo habka rakibaadda nooca cusub ee Gmail 4.5 ee loogu talagalay boosteejooyinka Android.
Ku soo dejiso Neymar joornaalada tooska ah ee terminal-kaaga Android
Codsiyo bilaash ah ayaa laga heli karaa Play Store oo leh taariikh nololeed ama Sawirro Live ah oo ah xiddigga da 'yar ee reer Brazil iyo saxiixa cusub ee Barça Neymar.
Jooji iskaanka faylka xun ee Google Chrome
Ma ogtahay in Google Chrome uu falanqeeyo dhammaan faylasha aan soo dejino si loo hubiyo inay ku jiraan faylal xunxun? ...
Nexus Media soo dejiyaha wuxuu wareejiyaa oo ka ciyaaraa faylashaada xusuusta USB isagoon xidid noqon
Nexus Media soo dejiyaha wuxuu wareejiyaa oo ka sii daayaa feylal fara badan oo laga soo qaado xusuusta USB-ga sida fiidiyowyada, sawirrada iyo muusikada iyadoon loo baahnayn in la xidido
Trick si aad u dhaqaajiso badhanka 'Nasiib ayaan yeelan doonaa' barta Youtube
Sidaad xusuusnaan doontid shalay, waxaan kuu sheegay inay YouTube isku dayeyso inay ku darto badhanka caanka ah ee Google 'Nasiib ayaan dareemayaa'. Waa hagaag markaa,…
Duolingo codsiga ugufiican ee lagu barto Ingiriisiga hadda laga heli karo Google Play
Duolingo, oo bilaash ah oo laga soo dejisan karo Google Play iyo habka ugu fiican ee looga barto Ingiriisiga mobilkaaga, oo leh noocyo jimicsi ah oo la jaanqaadi doona heerkaaga
Cusboonaysiinta Kalandarka Google oo leh midabbo khaas ah iyo in ka badan
Kalandarka Google ayaa keenaya xulashooyin cusub si loo habeeyo muuqaalka muuqaalka dhacdooyinka iyo ballamaha aan ku hayno nooca cusub ee maanta.
Google wuxuu soo bandhigayaa nooca cusub ee Gmail, oo diirada lagu saaray xakameynta sanduuqa
Google waxay ka shaqeysay sanad dhan inay noo keento nuucaan cusub ee Gmail oo leh horumarin ballaaran oo ku jirta sanduuqa sanduuqa iyo isbeddelada muuqaalka muuqaalka ah.
Dhammaan ogeysiisyada ku yaal desktop-kaaga waad ku mahadsan tahay Ogeysiisyada Dropbox Android
Adoo adeegsanaya Dropbox barnaamijkan xiisaha leh ee cusub ee Android Dropbox Ogeysiisyada ayaa kuu oggolaanaya inaad ka hesho ogeysiisyada mobiilkaaga miiskaaga
Taageerada kacaanka nGroove Snap, ku xir qalab kasta oo Android ah gaarigaaga
nGroove Snap waa taageero kacaan ah oo leh soojiidasho magnet ah taasoo ka dhigi doonta moobilkaaga inuu umuuqdo inuu dul sabuurayo shaashadda gaariga.
Kooxda ka dambeysa Go Launcher waxay bilaabeysaa Browser Xiga, oo ah biraawsar web ah kaas oo siin doona waxyaabo badan oo looga hadlo
Layaab aad u wanaagsan oo aad u wanaagsan ayaa ah Browser Xiga oo ay abuureen kooxda ka dambeysa Go Launcher taasina waxay keeneysaa dhammaan wanaagga dhammaan tartamada isla shabakadda shabakadda.
Trick si aad uga saarto xayeysiiska YouTube adiga oo aan isticmaalin kordhin
Sidaad ogtahay waxaa jira kordhino badan oo noo ogolaanaya inaan ka saarno xayeysiinta YouTube-ka. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira wax yar ...
Qalabka Google Glass ayaa la heli karaa si loo tijaabiyo mahadsanidiisa Zhouwei
Zhouwei, oo ah casriye, ayaa soo saaray dhowr ka mid ah codsiyada Google Glass wuxuuna abuuray apk of launcher oo aad ku isticmaali karto Android kasta.
Google Drive wuxuu helayaa cusbooneysiin weyn oo leh interface cusub iyo dukumiinti dukumiinti ah
Google Drive wuxuu helayaa cusbooneysiin weyn oo leh nooc cusub oo ku daraya isugeyn cusub oo Google Now-style ah iyo dukumiinti baaris ah.
Soo dejiso oo rakib ku rakibidda Launcher LG, Launcher LG u gaar ah qalab kasta oo Android ah.
Injineerada Google: Waxaan isku dayeynaa inaan saxno kala-goynta Android
Wadahadalladii Google I / O 2013, kooxda injineernimada Android waxay faallo ka bixiyeen inay doonayaan inay soo afjaraan tafaraaruqa si wanaagsan.
Cusbooneysiinta Hangouts, ugu dambeyntii la rakibay oo si buuxda u shaqeynaya
Shalay waxaan ka cabaneynay dhibaatooyin uu Hangouts siinayay dad badan oo adeegsadayaal ah, maantana Google ayaa hal mar wada xalinaysa dhibaatooyinka oo dhan.
Dhibaatooyin kala duwan oo bilaabista Hangouts
Dhibaatooyin dhowr ah oo ku saabsan Hangouts markii la soo saaray qalabyo kala duwan oo Android ah sida noocyada moobiillada iyo kaniiniyada.
Sida loo cusbooneysiiyo Gtalk ilaa Hangouts
Cashar fudud oo lagu cusbooneysiinayo laguna bedelayo Gtalk Hangouts, arjiga fariimaha cusub ee lagu soo bandhigay Google I / O 2013
Laga bilaabo maanta waxaad gali kartaa PDF-yadaada iyo EPUB-kaaga Google Play Books
1000 cinwaan ayaa laga soo gelin karaa laga bilaabo maanta barnaamijka Google Play Books, iyadoo la isticmaali karo foomamka faylalka loo isticmaalo ee Pdf iyo Epubs.
La sheekaysiga Heads-style ogeysiisyada wixii Android ah
Ogeysiisyada sabeynaya ayaa ah nidaam ogeysiis madax-qaabeed ah oo Facebook-ga ah oo ku habboon astaamaha Android.
Google Hadda Waraaq HD, Waraaq aan rasmi ahayn
Laga soo bilaabo XDA waxay umuuqataa Google Now Waraaq aan rasmi ahayn oo sifiican u buuxin kara Google Now miiskaaga.
Nova Launcher ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.1
Cusbooneysiin cusub oo ku saabsan Nova Launcher oo leh astaamo cusub sida miiska darbiga, xallinta cilladaha kala duwan iyo hagaajinta dalabka.
Xakamaynta Cagta oo loo heli karo qalab kasta
Xakamaynta Pie waa Launcher oo lagu dari karo Guri kasta oo sii qarsoon ilaa inta isticmaaleyaashu wacayaan.
Furo xulashooyinka horumariyaha ee S4
In Samsumg Galaxy S4 waa mid ka mid ah moodooyinka ugu horreeya ee suuqa ku dhuftey Android 4.2 jelly Bean, waa sababta oo ah ...
Solo Launcher, oo ah bilaawaan dhaqso badan oo shaqeynaya
Solo Launcher waa bedel wax ku ool ah oo deg deg ah Guriga loogu talagalay Android, oo ku faano xulashooyin badan oo qaabeyn ah.
Kali kali ah bilaash ah Android ayaa laga saaray Play Store khayaano darteed
MONOPOLY Free waxaa lagala baxay Play Store markii lagu eedeyay khiyaanooyin loo sameeyay isticmaaleyaasha ku rakibay boosteejooyinkooda
Hayso 2 Xisaabaad WhatsApp oo leh FonYou
Xaqiiqdii waligeed adiga ayey kugu dhacday inaad rabto inaad qof kulahadasho WhatsApp, laakiin aadan rabin inaad siiso lambarkaaga taleefankaaga gaarka ah, ...
Androse Launcher, muuqaalka Windows 8 ee ku jira Tablet-kaaga Android
Androse Launcher waa bilaash bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo na siin doona muuqaalka Windows 8-da cusub
ReadItToMe, waxay aqrisaa ogeysiisyadaada iyo wicitaanada kaa baaqday
ReadItToMe waa caawiye Android awood u leh akhrinta ogeysiisyada boosteejadaada kor iyo si toos ah.
Music.Mind Player, oo ah ciyaaryahan maqal ah oo ka duwan
Music.Mind Player waa ciyaartoy maqal ah oo loogu talagalay Android, taas oo xitaa ku jirta nooca Beta, waxay na siisaa fursado badan oo cusub iyo waxyaabo dheeraad ah oo dheeri ah
Sida loo rakibo barnaamijyada nidaamka loo qoondeeyey iyadoo la adeegsanayo Nidaamka Nidaamka Qalabka (ROOT)
Sida loo abuuro kaararka ganacsiga ee xirfadlayaasha ah QR code oo leh Cardfix
Iyada oo Cardfix ah waxaan si fudud u abuuri doonnaa kaararkayaga ganacsi ee xirfadleyda ah waxaanan si toos ah u soo saari doonnaa lambar QR ah oo aan ku keydin doonno goobteenna.
Kalandarka ++ Bilaash, kalandar leh fursado badan
Kalandarka ++ Bilaash waa codsi bilaash ah oo ku yaal Play Store kaas oo ku dari doona shaqooyin cusub kalandarka caadiga ah ee nidaamkeena.
Launchers for Android: Vire Launcher
Vire Launcher waa bilaash bilaash ah oo loogu talagalay Android-keena, mid ka mid ah Launchers-yada ugu fiican ee loogu talagalay Android ee aan awood u yeeshay inaan ku tijaabiyo aaladaha mobilada.
Reactiv Dialer Bilaash, wax ka beddelka suunka garaaca ee Android-keena
Reactiv Dialer Free waa codsi bilaash ah oo noo oggolaan doona inaan siino fursado badan oo dheeri ah iyo isbeddel muuqaal ah oo ku saabsan dialkeenna asalka ah ee Android.